Ungayigcina kanjani phansi izinkuni - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Ungayigcina kanjani phansi izinkuni
1. Ngemuva kokuba isitezi sokhuni sithengiwe futhi safakwa, ukulungiswa kwansuku zonke kubaluleke kakhulu ngesikhathi sokusebenzisa isikhathi eside, okuthinta ngqo impilo yenkonzo yaphansi. Noma i-laminate flooring inezinzuzo eziningi ezifana nokugqokwa kokugqokwa, ukumelana nokugqwala, ukumelana nokucindezelwa, ukumelana nomthelela, ukuhlanza okulula, ukunakekelwa, kanye nokuqina okuhle, ukulungiswa kwesayensi akunakwa. Ngoba kunezinkinga ezimbalwa impela ezibangelwa ukusetshenziswa okungafanele kanye nokulungiswa phansi.
2, imvamisa igcina phansi yomile futhi ihlanzekile, ungagezi ngamanzi amaningi, nakekela ukugwema ukucwiliswa kwamanzi isikhathi eside. Uma kukhona izitebele zamafutha kanye namabala phansi, sicela unake ukuwasusa ngesikhathi. Ungasebenzisa isithambisi esingenacala sokubandakanyeka namanzi afudumele ukuze welashwe.Kungcono ukusebenzisa isixazululo esikhethekile sokuhlanza ukuhlanza okuhambisana naphansi. Ungasebenzisi iziphuzo ze-caustic ezinjengamanzi we-alkaline, i-oxalic acid, amanzi anensipho, njll. Ukuthinta ingaphezulu lomhlaba, futhi ungalokothi usebenzise izinto ezivuthayo ezifana nophethiloli nobunye utshwala obusezingeni eliphezulu ukusula phansi. Izitezi eziqinile zokhuni kanye nama-floor-solid solid floor floor ahlala ekhiqizwa ukuze kulondolozwe isicwebezelisi futhi kunciphise ukuguga nokugqokwa.
3. Kunconywa ukubeka isikejana sokukhaba emnyango ukuvimba izinhlayiya zothuli ukuthi zingangeniswa phansi bese zilimaza phansi; izinto ezinesisindo ngokweqile kufanele zigcinwe ngokuqinile; ungadonseli lapho ususa ifenisha, kungakuhle ukuthi uyiphakamise.
4. Lapho kungekho muntu ohlala endlini, naka ukuvula iminyango yokungena komoya.
5. Uma phansi kufakwe ngaphansi kwezimo ezikhethekile, amanzi kufanele ahlanzwe ngokushesha, futhi othengisela phansi kufanele abikwe ngesikhathi. Isitezi kufanele sihlukaniswe ngumuntu okhethekile, futhi phansi nodonga kufanele komile ngokuphelele ngaphambi kokufaka isitezi.
6. Uma ikhaya lekhasimende lisebenzisa ukufudumeza phansi, sicela ufudumele umhlabathi ngokuqinile ngokuhambisana nezidingo zokushisa ukushisa ukuze uvikele ukulungiswa kokushisa okungafanele futhi kuthinte phansi.
Ungayigcina kanjani phansi izinkuni Okuqukethwe okuhlobene